Dadaalo lagu baajinayo dibadbaxa maalinta Jimcaha oo ka socda Muqdisho
Sunday April, 18 2021 - 07:45:06
Thursday February 25, 2021 - 08:54:12 in by salman abdi
Saacadihii ugu danbeeyay waxaa soconayay dadaalo la doonayo in lagu baajinayo dibadbaxa maalinta Jimcaha ay ku baaqeen midowga musharixiinta iyo sidii leysugu soo dhaweyn lahaa Xukuumadda iyo Midowga Musharixiinta.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kulamadii dhacay saacadihii la soo dhaafay wax xooggaa hormar ah laga sameeyay iyadoo maanta loo balansan yahay kulan kale oo ay ka qeybgali doonaan Ra'iisal Wasaaraha, madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Midowga Musharixiinta.
Wasiirka Wasaarrada Amniga Xassan Xudubeey Jimcaale ayaa kulamadan socda u xaqiijiyay warbaahinta
Midowga Musharixiinta ayaa dalbaday in marka hore dowladdu aqbasho sharuudo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ay raaligalin buuxda ka bixiso wixii 19kii bishan Febraayo iyo in laga qeybgaliyo shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Sidoo kale musharixiinta ayaa doonaya in loo fasaxo dibadbaxa ay ku baaqeen in uu Jimcaha dhaco kaasoo noqonaya dibadbax nabaddeed.
Kulanka maanta dhacaya ayaa lagu waddaa in lagu lafaguro inta badan qoddobada ay soo jeediyeen midowga Musharixiinta.
16/04/2021 - 17:01:27
Mudaharaad Lagu Diidan Yahay Xukunka Kornayl Doolaal Oo Burco Ka Qarxay Iyo Xaaladaha Taagan Oo Kacsan
12/04/2021 - 17:16:44
Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay iyo Baarlamaanka oo maanta kulmaya
12/04/2021 - 09:28:30
War Deg Deh Ah:-Masar oo lagu gubay meydka qof u dhintay cudurka Karoona.
07/04/2021 - 09:56:04
Waftigii Ka Socday Dalka Zambia Oo Maanta Soo Gaadhay Hargeysa & Si Habacsan Loo Qaabilay
05/04/2021 - 17:05:55